DAAWO: M/weyne Deni oo qaaday talaabo aysan qaadin dhammaan Madaxdii kahoreysay…
October 8, 2019 NEWS 4
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa qaaday talaabo aysan qaadin dhammaan madaxdii ka horeysay, wuxuuna bilaabay diwaangalinta Casriga ah ee Askarta Puntland, taas oo ahayd qodob muhiimad weyn waqtigan loo qabay.
Qorshaha diwaangalinta, Tirokoobka, Tayeynta iyo Tababarida ciidamada Puntland ayaa kamid ahayd balan-qaadkii Madaxweynaha, wuxuna maalmihii u horeeyey mudo xileedkiisa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay arrintan leedahay.
Diwaangalinta ciidamada Puntland ee habka casriga ah ayaa lagu bilaabay ciidamada Ilaalada Madaxtooyada Puntland, waxaana Askari kasta la marinayaa dhammaan baaritaano caafimaad, tababarka, ka dibna laga qaadayaa Faraha iyo suulasha si loo hubiyo kaarkiisa Askariga ee sharciga ah.
Guddiga dibu habeynta ciidamada oo ah khuburo Jeneraalo ah ayaa soo gudbiyey qorshahan, waxayna sidaas oo kale kutaliyaan dhismaha xerooyin ay kasoo baxaan ciidamaddu, kuwaas oo hadda la dhameystiray qaar kamid ah oo dhawaan xariga laga jari doono.
In la helo ciidamo leh heybad ciidan, kana madax banaan qabyaalad iyo arrimaha Taliye gaar meel ugu haysto ayaa kamid ah arrimaha sida weyn isha loogu hayo, waxaana Madaxweyne Deni uu ku heli doonaa taageero weyn.
Taabagalinta qorshahan dad badan ayaa u arka in ay Puntland ka guurayso nidaamka Caagleysiga, waxaana ku lamaanan caqabado waa weyn oo halis ah, kuwaas oo ka gudbidooda ay qaadan karto waqti gaaban, haddii ay Madaxdu ku adkeystaan go`aamadooda kuwajahan qadiyaddan.
22 sanno ka dib Puntland maleh ciidamo leh heybad ciidan, sidaas oo kale tababaran, Tayeysan, waxaana wali ka jira nidaam la mid ah kii waqtiga Jabhadaha oo ay ciidankii isku beel kasoo jeedaba leeyihiin taliye u gaar ah, taas oo magacyada ciidamadaas ka dhigtay ciidankii taliye hebel.
Asc tayeenta ciidamamadaa waa wax wanaagsan hadaanay ahay qorshe emaraadku wato dane kale laga leeyahay
Amiir Ninka Ragga ah lama libin Xasto,waxad ogata nin kasta ninka kale wa kaduwan yahay,wax iskumid ah majiran.
Ninka Ragga ah lama libin Xasto,masul kasta waxuu leyahay Barnamij & Siyasad ugara oo uu kaga duwan yahay midka kale.
XISBIGA XORNIMADA PUNTLAND wuu soo dhaweynayaa tilaaba kasta oo puntland horumar u hagaysa.
Dalkaaga iyo Dadkaaga halyey u noqo oo ku biir XISBIGA XORNIMADA PUNTLAND
xornimada putlan maxa laga xoraynayaa gaas xisbi miya samaysanaysaa
walee inan lagu amini karin hal doraa wa ninka yiri codkar ban aha balayo ku racda dabaal